Maro ireo mila alamina eto amin' firenena, indrindra ny sata mifehy ny mpanohitra, hoy Izy. Lasa sakana ho an'ireo antoko tsy ahafahany mirotsaka amin'ny fifidianana. Tsy mazava ny lalan-kaleha eto Madagasikara, hoy hatrany ity mpanao politika ity. Nohitsiany fa tsy mazava ny sata mifehy ny mpanohitra, ny lalàna mifehy ny fifidianana. Raha mazava ireo dia afaka miroso amin'ny fifidianana. Mila atao mazava ihany koa ireo lesoka nandritra ireo fifidianana nifanesy, ny lisi-pifidianana, ireo mpikambana eo anivon'ny CENi, ireo kojakojam-pifidianana... Mipetraka ihany fanontaniana hoe ahoana no hiatrehana fifidianana ? Nanamafy kosa ny tenany fa mety hanohana kandidà ny RMDM amin'ny fifidianana ben'ny tanàna, indrindra eto Antananarivo Renivohitra